FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက် WW1025 - တရုတ်ဟူဘေး Shengyu အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ
FOB စျေး: 2.99-8.99 / မီတာ / စတုရန်းမီတာ
အဆိုပါ FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက်လည်း polyester မိုဃ်းလင်းစာရွက်အားဖြည့်သည့်ဖိုက်ဘာမှန်ကိုခေါ်၎င်း၏ stablility နှင့်ကြာရှည်ခံမှုများအတွက် high-performance ကိုအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်, သစ်ရွက် polyester ဗဓေလသစ်နှင့် giberglass.Popular ပါဝင်ပါသည်, ကယျြပွနျ့စှာအားကစားကွင်းများတွင်အသုံးပြုသည်ဖန်လုံအိမ်, အမိုးအဘို့အဖျော်ဖြေရေးနှင့် မြို့ရိုးသည်။
ပုံစံ အထူ width အဖုံးအကျယ် အရှည် အလေးချိန် အရောင်
TT980 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 980mm 900-1200mm လိုအပ်သလို 1.6-3.8KG / M က အဖြူ, အပြာ, Gray, စ
WW1025 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 1025mm 940-1200mm လိုအပ်သလို 1.6-3.8KG / M က အဖြူ, အပြာ, Gray, စ
Shengyu FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက်၎င်း၏ဆန့်ကျင်အိုမင်းမြှေးပါးနီးပါးလုံးဝ filtrate အပို-ခရမ်းရောင်နိုင်နှင့်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ကဝန်ဆောင်မှုဘဝပါစေ။
ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများနှင့်အနိမ့် flexural ကိန်းပကတိတန်ဖိုး၎င်း၏ထက်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ Shengyu FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက်, ကလေပြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏တိုက်ခိုက်မှုသည်းခံနိုင်။
Shengyu FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက်၎င်း၏လျှောက်လွှာအပူချိန်တည်ငြိမ်ဂျီသြမေတြီအရွယ်အစားနှင့်အတူထံမှ-38 to110 နေကြပါတယ်။
FRP ဗဓေလသစ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအက်ဆစ်, alkaline များ, ဆား, အဖြစ်အများအပြားဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်
တင်သွင်းအမြှေးပါးနဲ့ anti-အိုမင်းအလွှာချမှတ် Shengyu FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက်, အရောင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းအာမခံပါသည်။
Shengyu FRP အလင်းရောင်စာရွက်၏အလင်းဂီယာ 60-85% ဖြစ်ပါတယ်။ FRP အလင်းရောင်စာရွက်ဖြန့်ကြဲမှတဆင့်အလင်းနှင့်ပျော့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမိုးလုံလေလုံတောက်ပစေသကဲ့သို့ဒုတစ်ဦးအလင်းတီးဝိုင်းဖွဲ့စည်းရန်မည်မဟုတ်။
ယခင်: China Cheap price Carbon Fibre Roof - ASA resin UPVC corrugated roof sheet T980 – Shengyu Building Materials
အဆိုပါ FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက်ဟောင်းခံရမည်, အရောင်သံမဏိစာရွက်နှင့်အတူမိုဃ်းလင်းစာရွက်၏အိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိပူးတွဲ life.In င်း၏ဝန်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ခြစ်ရာကိုကြောက်ရွံ့ဂရုတစိုက်ပြုလုပ် resistance.install ပဲရာသီဥတုအဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့အကြမ်းခံမိုဃ်းလင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် အဆုံးစွန်သောကျော်။
Method ကို Incrrect Method ကို Install Install ပြင်ပေး
1.The ထွင်းဖေါက်အချင်းအအေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပူနှင့်ကျုံ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးချဲ့ကိုကြောက်ရွံ့များအတွက်ပြုပြင်တာတွေဝက်အူအချင်းထက် 2-3mm ပိုပြီးဖြစ်ရပါမည်။
2.A ပရီမီယံရေစိုခံအဝတ်လျှော်နေတဲ့ဝက်အူများနှင့်ရေစိုခံခြင်းနှင့် dustproof သက်ရောက်မှုများအတွက်မိုဃ်းလင်းစာရွက်အကြားခံရမည်။
3.A ကို double-တဖက်သတ်ကော်တိပ်ပုလငျးစာရွက်နှင့် purline အကြားတိုက်ရိုက်ပွတ်တိုက်အားကိုကြောက်ရွံ့များအတွက် purline ကျော်ခံရမည်။
4.There တစ်ဦးရေစိုခံအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ဒေါင်လိုက်ရင်ခွင်ပူးတွဲအနေအထားနှစ်ခုကို double-တဖက်သတ်ကော်တိပ်ခွေဖြစ်သင့်သည်။
တစ်နေ့စာရွက်၏သိုလှောင်မှု 5.In ၎င်း၏ကြေကွဲ၏ကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အပေါ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုမထားကြဘူး။
1.The ညာဘက်အစိတ်အပိုင်း inadvisable တစ်ခုဖြစ်သည်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြု layout ကိုဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါပုံဆွဲထဲမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်။
အဆိုပါနေ့စာရွက်နှင့်အရောင်သံမဏိစာရွက်အကြားအိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိပူးတွဲ၏ 2.The အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကုန်းကနေ eaves အထိသို့မဟုတ်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကုန်းကနေဗဟို purlines အထိအပြည့်အဝရင်ခွင်ပူးတွဲဖြစ်ပါသည်:
အဆိုပါနေ့စာရွက်ဟာ thermosetting လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားနေချိန်မှာကျွန်မအဆိုပါနေ့စာရွက်နှင့်သံမဏိစာရွက်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိရကွဲပြားခြားနားသောတန်ဆာ processes.As အောက်မှာရှိပါတယ်, သံမဏိစာရွက်တစ်မှု, တစ်ဦးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ intersecion ထောင့်အတွက်ရရှိလာတဲ့, ချမ်းကိုလှိမ့လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဝင် ပိုကြီးတဲ့လမ်းဆုံထောင့်။ (ထိုလမ်းဆုံထောင့်သေးငယ်လွန်းသည်ဆိုပါက၎င်း၏ကျန်ရှိနေသောစိတ်ဖိစီးမှုအလွန်မြင့်မားကြလိမ့်မည်ကိုကြောင့်ကွဲအက်သို့မဟုတ်ပင်အသုံးပြုခြိုးဖောကျဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်။ ) ဒါကြောင့်သံမဏိစာရွက်ကျော်မိုဃ်းလင်းစာရွက်ထားဖို့ပိုအကြံပြုလိုတယ် ။
အထက်ပါအကြောင်းပြချက် II.For သည်မိုဃ်းလင်းစာရွက်သံမဏိစာရွက်အဆိုပါနေ့စာရွက်ကျော်သွင်းထားလျှင်သံမဏိစာရွက်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့လှိုင်းမောက်, ဆန့်ကျင် better.On သံမဏိစာရွက်ပေါ်သို့မိုဃ်းလင်းစာရွက် fit ကိုကူညီပေးပါသောမရှိသည်ဖို့လေ့ သူတို့ပင်မိုဃ်းလင်းစာရွက်များ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အလျားလိုက်ခင်းကျင်းလည်းကျယ်ပြန့်စေခြင်းငှါမဖြစ်, သို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများအပေါ်မနင်းစေခြင်းငှါ, leakage.A နောက်ထပ်ရေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတံ့သောမိုဃ်းလင်းစာရွက်ပေါ်ကွဲအက်လှိုင်းမောက်အတွက်ရရှိလာတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းစွာ fit မည်မဟုတ် အဆိုပါနေ့စာရွက် (ရေ leadage ဖြစ်စေတဲ့) သို့မဟုတ်ပင်ယာဉ်မတော်တဆမှု (တစ်စုံတစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့မှဆင်းကျရောက်) ၏ကွဲအက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, လယ်တို့၌ရသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဆိုပါနေ့တီးဝိုင်း,!
ပုံမှန် Node Drawing
ပူးတွဲဘုံ waveform စာရွက်ရင်ခွင်: သံမဏိစာရွက်များ၏နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အဆစ်မှဆွဲထားကြ၏ယင်း butyl ရော်ဘာတိပ်နှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင် profiled သံမဏိစာရွက်များပေါ်သို့တိုက်ရိုက်မိုဃ်းလင်းစာရွက်များကို ထား. , ၎င်းနေ့စာရွက်အရှည်တစ်လျှောက်ဆုံး purline အပေါ်ခံရမည်, အထပ် အိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိပူးတွဲအဆုံးမှာ2* 20mm butyl ရော်ဘာတိပ်ခွေနှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ 250mm ကျော်အားဖြင့်သံမဏိစာရွက်။
Frp မြှောင်းပုံခေါင်မိုး Sheet များ
ခေါင်မိုးသည် Frp Sheet များ